मनोरञ्जन Archive - Page5of 8 - चारदिशा
कंगनामाथि पोस्टर चोरीको आरोप
एजेन्सी – कंगना रनावत अभिनित चलचित्र ‘जजमेन्टल हे क्या ?’ प्रदर्शन हुनुअघि नै विवादमा फसेको थियो । अहिले फेरि प्रदर्शनमा आइसकेपछि यो चलचित्र फेरि नयाँ विवादमा तानिएकाे छ । यो चलचित्रलाई अहिले पोस्टर चोरी गरेको आरोप लागेको छ । हङ्गेरीकी महिला फोटोग्राफर फोरा बोर्सीले चलचित्रले पोस्टर चोरी गरेको आरोप...
पारदर्शी पहिरनमा देखिदा फेरी ट्रोलको शिकार बनिन् प्रियंका चोपडा
एजेन्सी – बलिउड अभिनेत्री प्रियंका चोपडा आजकाल कुनै न कुनै कारणसहित चर्चामा छाइरहेकी छिन् । पछिल्लो समय चुरोट तानिरहेको तस्बिरका कारण उनी निकै ट्रोल भएकी थिइन् । हालै प्रियंका श्रीमान् निक जोनाससँग स्विम सुटसँग गुलाबी पञ्जाका कारण निकै ट्रोल भएकी हुन् । यसै बिच प्रियंकाको नयाँ चर्चा थपिएको छ...
आसामका बाढी प्रभावितका लागि अक्षयले गरे २ करोडको आर्थिक सहयोग !
एजेन्सी – बलिउड सुपर स्टार अक्षय कुमार कुशल अभिनय कलाका साथ साथै कोमल हृदयका कारण पनि सबैमाझ परिचित रहेका छन। उनी अक्षयले हालै मात्र आसामका बाढी प्रभावितहरुको लागि २ करोड नगद सहयोग गर्ने घोषणा गरेका छन। जसको जानकारी अक्षय स्वयंले ट्वीटमार्फत गराएका हुन्। उनले लेखेका छन, ‘आसाममा आएको बाढिका...
डा. सिके राउतको जीवनीमा आधारित चलचित्र बन्दै
काठमाण्डौं – जनमत पार्टिका अध्यक्ष एंब मधेसका चर्चित नेता डा. सिके राउतको जीवनमा आधारित चलचित्र बन्ने भएको छ । ५० प्रतिशत उनको जीवनको भोगाई र ५० प्रतिशत चलचित्रको कथा जोडेर चलचित्र बन्ने भएको छ । उक्त चलचित्र नाम भने डा. सिके राउत द प्यासन राखिएको छ । हिजो राजधानीमा...
संगीत चोरीको आरोपमा कालीप्रसाद बाँस्कोटामाथि महानगरीय प्रहरी परिसरमा उजुरी
काठमाण्डौं – गायक तथा संगीतकार कालीप्रसाद बाँस्कोटामाथि संगीत चोरी भएको भन्दै महानगरीय प्रहरी परिसरमा उजुरी परेको छ। महानगरीय प्रहरी परिसरका डिएसपी होविन्द्र बोगटीका अनुसार नेपाल आइडलका फाइनलिष्ट सुमित पाठकको आवाजमा रहेको र बाँस्कोटाको शब्द तथा संगीत रहेको गीत समाचार को संगीत बिक्की महतले आफ्नो गीत बुजाइदेउनको संगीतसँग हु-बहु मिलेको...
एजेन्सी – बलिउड अभिनेत्री श्रीदेवीको करिब डेढ बर्ष अगाडी निधन भएको थियो । त्यससमय श्रीदेवीको बाथरुमको बाथटपमा डुबेर निधन भएको बताइएको थियो । तर अहिले श्रीदेवीको बाथटपमा डुबेर निधन नभई उनको हत्या भएको खुलासा भएको छ । श्रीदेवीको निधनबारे केरलाका प्रहरी महानिर्देशक डीजीपी ऋषिराज सिंहले श्रीदेवीको निधन बाथ ट्युबमा...
काठमाण्डौं – नायिका शिल्पा पोखरेलले अन्ततः छवि ओझालाई डिभोर्स दिएकी छिन् । उनले विगत ३ बर्षदेखि छविले दिएको यातना सहदैँ आएकी थिइन् । छविले जति नै दुख दिएपनि शिल्पालाई कतै न कतै छवि सुध्रिन्छन् भन्ने लागेको थियो । तर आफ्नो ज्यान नै धरापमा परेपछि उनी प्रहरीको सरणमा पुग्नु पर्यो...
‘शिल्पा जी, सीधै छवी ओझाको अदालतमा आउनुस्, न्याय पाउनु हुन्छ’: छवी ओझा
काठमाण्डौं – नायिका शिल्पा पोख्रेलका श्रीमान तथा चलचित्र निर्माता छवीराज ओझाले आफूमाथि लगाएका आरोप झुट रहेको दाबी गरेका छन् । नायिका पोख्रेलले श्रीमानबाट आफूलाई घरेलु हिंसा भएको र जीउज्यानको सुरक्षामा खतरा रहेको भन्दै प्रहरीमा उजुरी दिएकी थिइन् । त्यसपछि दुवै पक्षलाई बोलाएर प्रहरीले कुरा मिलाएर पठाएको थियो । छवीले...
अवार्ड पाएपछि स्वस्तिमाले भनिन्, ‘निश्चल मेरो लागि लक्की छ’
काठमाडौँ – नायिका स्वस्तिमा खड्का चर्चा यतिबेला जताततै छ । केहीसमय अघि मात्र उनले सार्क फिल्म फेस्टिभलमा उत्कृष्ट नायिकाको अवार्ड जितेकी थिइन् । नेपाल आउने बित्तिकै उनले नेपालकै सबैभन्दा ठूलो राष्ट्रिय चलचित्र पुरस्कार पनि चलचित्र बुलबुल बाट उत्कृष्ट नायिकाको अवार्ड हात पारेकी छिन् । अवार्ड पाएपछि स्वस्तिमा निकै नै...
एजेन्सी – बलिउड अभिनेत्री सोनाक्षी सिन्हा यतिबेला ठगीको मुद्दाका कारण विवादमा तानिएकी छिन् । भारतीय सञ्चारमाध्यमहरुका अनुसार, सोनाक्षीले सन् २०१८ को सेप्टेम्बरमा एक स्टेज शोमा प्रस्तुति दिनुपर्ने थियो । सोनाक्षीलाई यो कार्यक्रमका लागि २४ लाख भारतीय रुपैयाँ पनि दिइएको थियो । तर पछि सोनाक्षी त्यो कार्यक्रममा सहभागी भइनन् ।...